Xafiiska Qaramada Midoobay Ee Soomaaliya Oo Qalabka Doorashooyinka Aqalka...
Arbaco, Luulyo, 21, 2021 (Wararka-Maanta) – Guddiga hirgalinta doorashooyinka heer Dowlad Goboleed Puntland, ayaa maanta qalab ay kamid yihiin sanaadiiqda codbixinta kala wareegay xafiiska UNSOM ee Garowe.Guddiyada hirgalinta doorashooyinka heer Federaal iyo heer Dowlad Goboleedba ayaa diyaar garow ugu jira qabashada doorashada Aqalka sare ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya, taasoo dhacaysa 25 ka bishan.
Waxaa sidoo kale maanta mar sii horreysay qalabkaan oo kale xafiiska UNSOM ee magaalada Kismaayo kula wareegay guddiga hirgalinta doorashooyinka heer Dowlad Goboleed ee ee Jubbaland.
Barlamaanka Puntland ayaa lagu wadaa in khamiisto berri ah oo ay dib iskugu soo laabanayaan uu magacaabo guddiga maamulaya doorashooyinka aqalka sare, halka barlamaanka Jubbaland uu todobaadkan magacaabay guddigaas.
Doorashada aqalka sare waa bilowga doorashooyinka guud ee dalka kusoo wajahan.
Axad, Luulyo, 25, 2021 (Wararka-Maanta) – Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya tiro hoobiyeyaal ah oo Xalay lagu garaacay degmada Awdhiigle ee gobolka Sh/hoose.Madaafiicda Xalay lagu weeraray degmada Awdhiigle ee gobolka Sh/hoose ayaa la sheegay iney geysatay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac.
Inta la xaqiijiyay waxaa madaafiicda lagu garaacay Awdhiigle ku dhintay 4 ruux oo shacab ah, waxaana la sheegay iney ku dhaawacmeen ku dhawaad 10 ruux oo kale.
Dadka deegaanka Awdhiigle ayaa sheegay in weerarka madaafiicda ka hor uu dhacay dagaal culus oo dhexmaray Al-shabaab iyo ciidamada dowladda ee ku sugan degmadaasi, lamana oga khasaaraha ka dhashay weerarkaasi.
Wararka Maanta : Barlamaanka Puntland oo isku khilaafay wax ka bedelka xeer hoosaadka golaha...
Saraakiil ka tirsan ciidanka Xoogga dalka ayaa sheegay iney iska difaaceen weerar culus oo kaga yimid dagaalamayaasha Al-shabaab, islamarkaana ay gaarsiyeen khasaare xoog leh.
Majirto wax war ah oo kasoo baxay dhanka dagaalamayaasha Al-shabaab oo ku aadan weerarka isugu jiray madaafiicda iyo dagaalka tooska ah ee la sheegay iney ku qaadeen degmada Awdhiigle ee gobolka sh/hoose.
Wararka Maanta : Maskaxdii ka dambeysay dilka madaxweynihii Haiti oo la shaaciyay - Caa...